အသက် (၄၀) အရွယ်မှာ (၁၀)နှစ်လောက်ပိုငယ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ? - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
အသက် (၄၀) အရွယ်မှာ (၁၀) နှစ်လောက်ငယ်ရွယ်တဲ့အသွင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေ လိုအပ်သလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်. နုပျိုအောင်ပြင်ဆင်နေထိုင်ခြင်းဟာ.အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးစေပါတယ်။
၁။ သွားကို ဂရုစိုက်ပါ
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ သွားတွေဟာ အဝါဘက်ကို ပြောင်းလာပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သွားများဝါလာခြင်းဟာ သင်အသက်ရလာပြီဆိုတာ ဖော်ညွှန်းပေးတဲ့ လက္ခဏာပဲပေါ့။ ဒီတော့ သွားဖြူဖြူလေးတွေရအောင် တတ်နိုင်ရင်တော့bleaching treatment ယူသင့်ပါတယ်။ အိမ်မှာလဲ သွားတိုက်ဆေး ကောင်းကောင်းနဲ့ စင်ကြယ်အောင်နေ့စဉ် ထိန်းသိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။
အသက် (၃၀) နောက်ပိုင်း ခန်ဓကိုယျအစာခြေဖျက်မှုစနစ်ဟာ နှေးကွေးလာပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်မလုပ်ရင် ၁နှစ်မှာ ၂ပေါင်လောက်ကတော့ အသာလေးတက်သွားမှာပါ။ သင် အသက် ၄၀ လဲရောက်ရော..အော်တို (၁၀)ပေါင် တက်ပြီးသား
ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းပါ။
၃။ နုနယ်စေသော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုး ပြုလုပ်ပါ
ကိုယ့်အရွယ်မှာ လူငယ်အဝတ်တွေ ကောက်ဝတ်တာမျိုးကို မဆိုလိုပါဘူးနော်။ ကိုယ့်ကို ငယ်ရွယ်တဲ့ သွင်ပြင်ဆောင်စေတဲ့ အရောင်၊ အဝတ်အစားမျိုးကို ဝတ်ပါလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ငယ်သူတွေလို အဝတ်ပါးပါးတွေ၊ စကပ်တိုတွေ ဝတ်ခြင်းက သင်ဟာ အရမ်းကိုငယ်ချင်လွန်းပြီး ကိုယ်အသက်ကြီးတာကို တိုက်ရိုက်ပြလိုက်သလိုမျိုးပုံစံဖြစ်စေပါတယ်။ မသေမသပ် ပွပွရွရွ အကျီၤများ၊ ဂါဝန်များကို ဝတ်ဆင်ခြင်းကလဲ ခန်ဓာကိုယျ ချို.ယွင်းချက်တစ်ခုခုကို ပုန်းကွယ်ချင်သယောင် ဖြစ်စေပါတယ်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အဝတ်အစားမျိုးကို အတတ်နိုင်ဆုံးဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
၄။ ကွက်တိကျတဲ့ ဘရာစီယာ ဝတ်ပါ
ဘာဆိုင်လို့လဲ လို့ ထင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘရာကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းဟာ နုပျိုစေခြင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အသက်ရလာရင် ရင်သားက တဖြည်းဖြည်း တင်းရင်းခြင်း လျော့နည်းလာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးမွေးထားသော မိခင်များ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘရာ Fitting ချပေးသောဆိုင်များတွင် ကိုယ်နဲ့ ဘယ် Cup ကအသင့်တော်ဆုံးလဲ တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။ (နိုင်ငံ အများစုရှိ Store ၊ အရောင်းဆိုင်များတွင် ဘရာ Fitting ချပေးသော ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ရှိပါသည်)။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရင်သားအရွယ်အစားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဘရာစီယာကို ဝတ်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် တင်းရင်းလှပတဲ့ နုပျိုတဲ့ အသွင်ကို ရရှိစေမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ကာလာကို ရွေးပါ။ ဆံပင်ဖြူ တဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ (၄၀) အရွယ်မှာ ဆံပင်အမည်း သို့ အညိုပုတ်ရောင်ဆိုးခြင်းက ပြန်ထွက်လာတဲ့ ဆံပင်ဖြူတွေကို သိသာ
ထင်ရှားစေပြီး ရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။ အရောင်ဖျော့ဘက်ကို highlight ဖောက်ထားရင်တော့ Hair Salon ခဏခဏသွားရခြင်းမှ သက်သာစေမှာပါ။(ဈေးတော့ နည်းနည်းကြီးပေမယ့် သင့်ကို နုပျိုစေမှာ အမှန်ပါ)
(၃၀) ကျော် (၄၀) နီးပြီဆိုတာနဲ့ မလိုချင်တဲ့ အရေးအကြောင်းတွေ လက်ဆောင်ရရှိလာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် မျက်လုံးတဝိုက်က ကျီးကန်းခြေရာများဖြစ်ပါတယ်။ အမည်းစက်တွေ အသားအရည် ကြမ်းတာတွေက အစပါ။
Botox ထိုးခြင်း၊ Gel Fillers ပြုလုပ်ခြင်းများ မလုပ်ချင်ပါက အနည်းဆုံးတော့ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်အောင် နေ့စဉ် SunScreen လိမ်းပါ။
မိတ်ကပ်တွေ ပေါင်ဒါတွေ ထူထူလိမ်းခြင်းက သင့်ရဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို ပိုမိုထင်ရှားလာစေပါတယ်။ ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ပိုရင့်တဲ့ပုံ ပေါ်စေပါတယ်။ eye shadow အရောင်ဖျော့ဖျော့ နှုတ်ခမ်းနီ အရောင်ဖျော့လေးများဆိုးခြင်းကလဲ အရေးအကြောင်းရှိတဲ့ နေရာတွေကိုသတိပြုမိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြောင်းသက်သာဖို့ ခရင်မ်ကောင်းကောင်းလိမ်းပြီး ရေများများလည်းသောက်သင့်ပါတယ်။
(leaf-tv မှ Artical အား Your Fitster Teamမှ ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်သည်)